Mpanamboatra tariby sy mpamatsy | China Cables Factory
Ity tariby UTP LSZH ity dia natao hanaterana fenitra matanjaka mifototra amin'ny fahombiazana ahazoana antoka optimum fantsom-pifandraisana ho an'ny tambajotra haingam-pandeha haingam-pandeha ankehitriny. Ny tariby dia natao hanohanana ireo rindranasa tambajotra marindrano maharitra hatramin'ny 100 metatra. Pair color code Pair 1: White / Blue, and Blue Pair 2: White / Orange, and Orange Pair 3: White / Green, and Green Pair 4: White / Brown, and Brown Application ● Manohana ny tambajotran-tsoratr'orinasa 6A mahatratra hatramin'ny 500 MHz fampiharana ● Mitsivalana sy hazondamosina ...
Endri-javatra 1. Izy io dia mandray fitaovana vita amin'ny varahina tsy misy oksizena avo lenta miaraka amin'ny fanoherana ambany sy ny fahaizan'ny fifindran'ny signal. 2. hoditra matevina vaovao, mateza matevina ary mivalona miaro, manakana ny fahanterana. 3. Ny rakotra anatiny be hakitroka dia mahazaka harafesina ary manana fantsom-pandehanana tsara. Famaritana tariby karazana CAT6 Shielding karazana UTP Fitaovana tariby sheath PVC / LSZH miasa hafanana -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 Cable) Taratasy fandrefesana tahan'ny 1Gbps Cable halavany 305M / vol ...
Ity UTP Lan Cable CAT5E Ethernet ity dia manana dingana mandroso, izay manana androm-piainana lava ampiasaina. Araka ny fenitra Ethernet napetraky ny IEEE, ny faritra iray eo an-toerana mampiasa topology kintana dia mety amin'ny mpivady miolakolaka. Ho fanampin'izany, mahatsapa ny fiasa izy mba hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fitaoman'ny fanelingelenana elektromagnetika, mba hitazomana ny rafitry ny tariby hitazona ny fifandanjana elektromagnetika tsara sy ny fahombiazan'ny fampitana. Andao miaraka amin'ny fitaovana avo lenta, ...
Reel tariby metaly mora alefa ho an'ny tariby vita amin'ny vy mifono vy
Ny rojo tariby mifono vy voafintina finday dia novolavolaina ho an'ny fametrahana an-tsaha vonjimaika izay ilana fifandraisana amin'ny fibre. Izy io dia tonga amin'ny tariby tariby mora entina hanamorana ny fitaterana sy ny fametrahana azy. Ny telegrama mifono vy dia malefaka ary mahazaka fampiasana maro tsy misy kink. Ny tendrony iray amin'ny tariby dia raikitra amin'ny roul raha ny tendrony iray hafa kosa mihodinkodina malalaka noho ny fametahana ireo fitaovana. Amin'ny ankapobeny, ireo dia hamboarina mifanaraka amin'ny takian'ny mpampiasa ka misy ny safidy var ...
Diametera tariby (mm) Diameter an'ny fibre (mm) Tanjon'ny tariby (kgs) tanjaka mahery (N) tanjaka fanosihosena (N) Min. Bending Radius Temperature Range (℃) Vetivety Fotoana fohy Fizarana fohy Fotoana fohy 1.6 0.6 2.5 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 1.8 0.6 3.0 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 2.0 0.9 3.5 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 2.4 0.9 5.0 60 100 100 500 10D 20D -20 ~ + 60 ...
Reel tariby optika plastika azo entina
Reel tariby tsy voavaky matihanina izay natao sy novolavolaina, mety amin'ny tariby lava isan-karazany. Ny frame dia vita avy amin'ny PC matanjaka (Polycarbonate) miaraka amina tohotra sy frein, ny roul dia vita avy amin'ny fitaovana PE mitambatra manokana miaraka amina mpamatsy tariby azo esorina. Manana tombony be dia be izy io, toy ny lanja maivana, fanoherana fanoherana, fanoherana ny fahalavoana, tsy mora fanovana, fanoherana solika, fanoherana UV ary sns. FANAZAVANA FAMPIANARANA —— PCD235 fahaiza-manao dia miankina amin'ny savaivony ivelany samy hafa ny c ...
MTWC Tafika mpampitohy fibre optika tsy voafehy
Natao manokana ho an'ny tariby optika any an-tsaha. Ny rafitra fanidiana bayonet tsy miandany dia afaka mahatsapa ny fifandraisana haingana sy tsy misy antony eo amin'ny loha sy ny seza, ny loha sy ny loha, ny seza sy ny seza. Fifandraisana multi-core sy fampidirana jamba; fatiantoka ambany sy ambany azo itokisana; fahamendrehana, tsy tantera-drano, vovoka, fanoherana ny tontolo iainana henjana, sns., dia azo ampiasaina amin'ny tambajotram-pifandraisana fibre optique miaramila, rafitra informatika, fiaramanidina an-tsambo na konferansa vonjimaika entin'ny sambo ...
GYXTC8Y ivelany fiaramanidina Fig8 Uni-Tube non-Armored Cable
Fiasan'ny maripana miasa: -40 +C ka hatramin'ny 70ºC Storage: -50 +C ka hatramin'ny 70ºC Fametrahana: -30 +C ka hatramin'ny 70ºC Bending Radius: 10atic Static Dynamic 20D Famaritana Uni-Tube Fig8 tariby tohanan'ny tena misy tariby apetraka ao anaty fantsom-boaloboka malalaka feno jelly, rehetra singa iray manontolo sy mpandefa vy vita amin'ny vy dia rakotra palitao ivelany polyethylene. Product Fiber Fiber: 2-12 fibre Uni-malalaka fantsom-gel feno fantsom-boasary ivelany: Black UV sy polyethylene mahatohitra hamandoana (PE). Messenger Wire: Phosphatized s ...
GYXTC8S ivelany fiaramanidina Uni-Tube Fig8 tariby optika tohanan'ny tena miaraka amin'ny fiarovana ny biby
Fiasan'ny maripana miasa: -40 +C ka hatramin'ny 70ºC Storage: -50 +C ka hatramin'ny 70ºC Fametrahana: -30 +C ka hatramin'ny 70ºC Radius miondrika: Filazalazana statistika 10D Dynamic 20D Uni-Tube Fig8 Fandraisana an-tanana tariby napetraka ao anaty fantsom-boaloboka feno fantsom-boalavo, ary voaaro amin'ny fiarovan-tratra mitafo vy. Ny singa rehetra sy ny mpitondra vy vita amin'ny vy dia rakotra palitao ivelany polyethylene. Product Fiber Fiber: 2-24 fibre Uni-malalaka fantsom-gel feno Fitaovam-piadiana Fitaovam-piadiana: kasety vita amin'ny vy vita amin'ny palitao ivelany ...
GYTA Duct ivelany Loose Tube Single Jacket tsy tariby mifono vy
Fiasan'ny maripana: -40ºC ka hatramin'ny 70 StorageC Storage: -50 toC ka hatramin'ny 70ºC Fametrahana: -30 toC ka hatramin'ny 70ºC Radius miondrika: Famaritana 10D Dynamic 20D Filazalazana tariby tsy miady amin'ny jiro tokana no maivana miaraka amin'ny savaivony kely ary natao ho an'ny fantsona sy fametrahana aerial miaraka amin'ny fomba fikapohana. Ny fantsom-baravarankely dia mihantona manodidina ny mpikambana ao amin'ny hery afovoany. Ny vodin-tariby dia arovana miaraka amin'ny jelly hisorohana ny fidiran'ny rano sy ny fifindra-monina, Polythylene Aluminium voahosotra toy ny sakana amin'ny hamandoana. Ary rakofana b ...
GYFXTY-FL Tariby tsy misy metaly Flat-Span Aerial Drop Cable
Fiasa amin'ny maripana: -40ºC ka hatramin'ny 70ºC Storage: -50ºC ka hatramin'ny 70ºC Fametrahana: -30ºC ka hatramin'ny 70ºC Radius miondrika: Famaritana 10D Dynamic 20D Famaritana natao ho an'ny fametrahana haingana sy mora amin'ny fikirakirana, ny tariby Flat-Span Drop no farany rohy ho an'ireo tambajotra FTTx androany. Ny endriny dia namboarina tamin'ny alàlan'ny teknolojia buffer tuber voaporofo miaraka amina fantsona tokana misy fibra 24. Tsorakazo diélectrika roa mifanohitra amin'ny diametrika dia apetraka eo anilan'ny fantsom-boaloboka mba hanomezana ny mec ...
GYFXTY-FG ivelany Uni-Tube Tariby Dielectric Aerial Drop rehetra
Fiasan'ny maripana: -40ºC ka hatramin'ny 70ºC Storage: -50ºC ka hatramin'ny 70ºC Fametrahana: -30ºC ka hatramin'ny 70ºC Bending Radius: Static 10D Dynamic 20D Famaritana Uni-Tube All Cable Dielectric Aerial Drop dia noforonina manokana ho an'ny Fiber-to-the-Subscriber fampiharana. Boribory io, tariby diélectrique rehetra mifanaraka tsara amin'ny fametrahana karazana drop-type manohana tena ary koa amin'ny fanamboarana kapoka na lakandrano. Ny mpikambana matanjaka hery kofehy fitaratra dia ampiasaina amin'ny fiarovana mekanika fanampiny. Fanamboarana vokatra ...